Unogona kudzorera yako Apple Watch kusvika pamazuva makumi mashanu kana wachi isingayeri moyo wako zvakanaka | Ndinobva mac
Apple's chigadzirwa kudzoka mutemo ndeye Mazuva gumi nemana kubva musi wekutenga, kunze kwekunge mune akakosha nguva, senge yekutenga yeKisimusi, uko nguva iyi inowedzerwa kusvika mazuva mashoma mushure mezororo.
Pane kudaro, nhasi takadzidza kuti Apple ichaita yakasarudzika neApple Watch, iyo inogona kudzoserwa mu mazuva makumi mashanu ekutanga, chero nguva yegore, kana chikonzero chiri hutano hwemwoyo kana humwe hunhu hwakafanana, senge zvisina kujairika mutinhimira. Isu tinonzwa nhau kuburikidza nechomukati Apple gwaro rinotumirwa kune Apple inotenderwa vatengesi uye vatengesi.
Ichi chiito chiri kuitwa, zvirinani kwenguva, muUS chete Maitiro acho anotevera: Apple Store kana zvitoro zvinogamuchirwa zvichaendesa zvikumbiro kune Apple rutsigiro. Naizvozvo, mutengi anogona kutaura zvakananga neApple nefoni, email kana Chat, kukumbira kudzoreredzwa pakati pe15 ne45 mazuva mushure mekutenga.
Iwo mamodheru umo chiito ichi chinogona kukumbirwa ichave iwo ayo Apple misika panguva iyoyo. Ndokunge, iyo Nhepfenyuro dzeApple 4, iyo ine ECG uye mamodheru anoyera kuyerwa kwemoyo, kubva kuChikamu 1. Gwaro rinoratidza kuti iyo ECG kunyorera uye notices dzinozogoneswa senge dzewatchOS 5.1.2.
Chitoro cheApple hazvidiwe kutarisa kusagadzikana kushanda muECG application. Muchokwadi, zvirinani nemutemo wekuchengetedza data, vangangodaro vasingakwanise kuzviita kunze kwekunge iwe uchivapa mvumo. Ndokusaka zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti Apple inodzosera yese Apple Watch kana mutengi achipomera matambudziko emoyo mumazuva ekutanga makumi mana nemashanu mushure kutenga. Chero zvazvingaitika, sezvo gwaro reApple risingapinde mune zvakawanda, isu tinofanirwa kungwarira nematanho akagamuchirwa neApple kubvuma kudzoka kunze kwenguva yakatarwa.
Iyo nyowani Apple ECG application inokutendera iwe kuyera mhando yeiyo kurova kwemoyo kana kana ikawanikwa kurova zvisina kujairika kana kuwana zviratidzo zvekugadzira atrial. Nekuisa chete chigunwe chako pakorona, mumasekondi makumi matatu ichatiratidza mhedzisiro yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Unogona kudzorera yako Apple Watch kusvika pamazuva makumi mashanu kana wachi yacho isinga kuyedze moyo wako nemazvo
Mashandisiro emuvara uine chaiyo hexadecimal kukosha se Wallpaper mune macOS